दुलही जस्तै सिंगारिएको संसद भवन (फोटोफिचर), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काठमाडौं। सरकारले शुक्रबार प्रस्तुत गर्न लागेको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम अबको केही बेरमा सुरु हुँदैछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अपरान्ह ४ बजे संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछिन्।
बैठकमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका नै सांसदहरु उपस्थित रहने भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीको उपस्थिती हुनेभएपछि यतिबेला संसद भवनलाई दुलही झै सजाइएको छ।
भवन अगाडि रहेको बगैचा लगायतका स्थानमा रङ्गीविरङ्गी कपडा, राष्ट्रिय झण्डा, गमलाहरु राखिएको छ। यस्तै सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको छ। चेकजाँचका लागि तालीम प्राप्त कुकुरको प्रयोग गरिएको छ।